Sathetha noCarlos Quintanilla, umongameli wangoku weQGIS Association, owasinika inguqu yakhe yokunyuka kwemfuno yemisebenzi enxulumene ne-geosciences, kunye noko kulindeleke kubo kwixesha elizayo. Hayi…
Inika umdla indlela amaphulo oMthombo oVulekileyo akwazile ukuzigcina ngendlela ezinzileyo kwaye abonelele ngamathuba oshishino kwabo banexabiso elongezelelekileyo lokuba negalelo; ngelixa uvumela ukuzinikela kumbindi weshishini usazi ukuba iimfuno…
Ukuthatha ikhosi ye-QGIS ngokuqinisekileyo kuyinjongo yabaninzi kulo nyaka. Kwiinkqubo zomthombo ovulekileyo, i-QGIS iye yaba sisisombululo esifunwa kakhulu, zombini ziinkampani zabucala kunye nemibutho…
Xa sele siza kuphelisa ubomi be-QGIS kwiinguqulelo ze-2.x, silindele oko kuya kuba yi-QGIS 3.0, eli phepha lisibonisa oko kufakwe kwi-QGIS 2.18.11 'Las Palmas' eyenziwa ngokusemthethweni ngenyanga kaJulayi oku...
Kunyaka ophelileyo ndiye ndakwazi ukubona indlela umhlobo wam "uFiliblu" awayeyibeke ecaleni inkqubo yakhe yeVisual Basic for Applications (VBA), awayeziva ekhululekile ngayo, kwaye wasonga imikhono yakhe yokufunda iPython ukusuka ekuqaleni, ukuphuhlisa...
INkqubo yeSizwe yoLawulo lwePropati (i-SINAP) liqonga lezobuchwepheshe elidibanisa lonke ulwazi olunxulumene nezixhobo eziphathekayo kunye nolawulo lwesizwe, apho abantu abahlukeneyo, ababucala kunye nabadlali ngabanye barekhoda zonke iintengiselwano ...
Kwiiprojekthi ezininzi endithathe inxaxheba kuzo, ndibone ukuba ukubhideka okubangelwa yi-LADM akudityaniswanga nokuyiqonda njengomgangatho we-ISO, kodwa kukwahlulahlula ingqikelelo yokusetyenziswa kwayo kwimeko yokusetyenziswa koomatshini...
Ukuphunyezwa kwe-LADM kusetyenziswa i-INTERLIS-Colombia
Ngeveki yesithathu kaJuni 2016, i-INTERLIS Course yanikezelwa, ibonwa njengolwimi kunye nesixhobo sokuququzelela ukuphunyezwa koMfanekiso weDomain yoLawulo loMhlaba (LADM) kwindawo yokulawula umhlaba waseColombia. Ikhosi yi...
Enye yezona ndlela zixhaphakileyo ekusetyenzisweni kweGeographic Information Systems kukwakhiwa kwemigangatho yendawo evela kulwazi oluvela entsimini. Nokuba oku kubonisa ulungelelwaniso, iinkqutyana zepasela, okanye iigridi zomphakamo,...
I-QGIS izibeke njengesona sixhobo sikhula ngokukhawuleza somthombo ovulekileyo kunye neqhinga lozinzo lokusetyenziswa kwe-geospatial. Kuyasivuyisa ukwazi ukuba iinguqulelo eziphathwayo ze-QGIS sele zikhona. Ukusetyenziswa okubonakalayo kwezicelo eziphathwayo kuthetha ukuba...
Uninzi lwethu luyazibuza: Iza kukhululwa nini i-QGIS 3.0? Kunyaka ophelileyo (2015) iqela leprojekthi liqalise ukuphanda nini kwaye njani i-QGIS 3.0 iya kukhutshwa. Bathembisile, ngokwesithuba sika-Anita Graser,…
I-Qgis -Ukulinganisa iipasile ezisekwe kwicandelo lesitshixo se-cadastral
Ityala: Ndineziza zikamasipala, kunye necadastral key conformation ngale ndlela ilandelayo: iSebe, uMasipala, iCandelo, ipropati. kangangokuba igama legama liqulunqwe njengoko kubonisiwe emfanekisweni: Umzekelo: 0313-0508-00059 Isidingo Le meko...
I-Twitter ilapha ukuhlala, ngakumbi ukuxhomekeka okukhulayo kwi-Intanethi ngabasebenzisi kusetyenziso lwemihla ngemihla. Kuqikelelwa ukuba ngo-2020, i-80% yabasebenzisi baya kuqhagamshela kwi-Intanethi kwizixhobo eziphathwayo. Nokuba intsimi yakho,...
Ukwenza i-Cadastre kunye neRegistry yePropati eyiNgcaciso isebenze kunye ngoku ingomnye wemingeni enomdla kakhulu kwiinkqubo zokuphucula iinkqubo zamalungelo epropati. Ingxaki idla ngokuba...